2017 May 07 | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
XOG XASAASI AH: Hanti Dhawrihii xilka laga qaaday oo maanta diiday Xilwareejinta & Madaxda DFS oo go’aan adag qaatay
MUQDISHO(P-TIMES) – Hanti dhawrihii dawladda Faderaalka ee Soomaaliya Dr Nuur Faarax Jimcaale ayaa si adag u diiday maanta in uu gabi ahaanba wareejiyo xilkaas, oo ay dhawaan isku raaceen shaqo ka ceyrintiisa Madaxweynaha & Golaha Xukuumada Soomaaliya. Hanti dhawraha ayaa mudo dheer laga sugayay in ay xarunta keenaan ciidamada Ilaalada Madaxtooyada, balse ugu dambeyntii talaabadan […]
DHAGEYSI XASAASI AH: Kufsi Naxdin leh oo ka dhacay degmada Burtinle & Dawladda Puntland oo amar bixisey
GAROOWE(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Burtinle ee gobalka Nugaal ayaa sheegaya in uu magaaladaas ka dhacay fal lagu kufsaday gabar 14 sanno jir ah oo kamid ahayd hablaha magaaladaas ku nool. Wararka ayaa sheegaya in ay gabadhaas kufsadeen nin oo ilaa hadda ay baadi goobaaan ciidamada dawladda Puntland, isla markaasna ay cadaaladda horkeeni doonaan. […]
WAR DEG DEG AH: DF Soomaaliya oo ku dhawaaqday Horjoogayaasha Shabaab oo ay dishay+MAGACYO
War-saxaafadeed goor dhow kasoo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay 5-tii bishan ay gobolka Shabellaha Hoose ku dileen hoggaamiyahii Al-shabaab u qaabilsanaa gobolkaasi. Hoggaamiyaha ay dowladda sheegtay iney dishay ayaa lagu magacaabaa Macallin Cismaan Cabdi Baadil, sidoo kalena waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay iney lala dilay Saddex kale […]
AKHRISO: Madaxweynaha Puntland oo goor dhaw magacaabis deg deg ah sameeyey.
NAIROBI(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa saxiixay wareegtada magacaabida Agaasimaha guud ee Hay’adda La dagaalanka AIDS-ka Puntlnad ee loo yaqaano PAC. Madaxweynaha ayaa u magacaabay xilkan in uu qabto Cabdiqaadir Maxamed Axmed, iyadoo uu dhawaan xilkan la wareegi doono. Wareegto ka soo baxday Xaafiiska Madaxweynaha Puntland ayaa u qorneyd. Madaxweynaha Dawladda Puntland […]
AKHRISO: Madaxda Siyaasadda Soomaalida oo kulan xasaasi ah ku leh magaalada Nairobi
NAIROBI(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegaya in madaxda dawladda Faderaalka & dawladdaha xubnaha ah ay iskugu tageen magaaladaas oo ay leeyihiin kulan xasaasi ah. Hogaamiyaasha Siyaasadda ayaa ka arinsanaya arrimaha shirka magaalada London oo ay ilaa berrito u socdaali doonaan, kana qeybgalayaan shirkaaas. Wafdi ka socda dawladda Faderaalka ayaa […]
AKHRISO+XOG MUHIIM AH: Dawladda UK oo shaacisay 4 qodob oo looga hadlayo shirka LONDON ka dhacaya?
LONDON(P-TIMES)- Wasaaradda Arrimaha dibada ee Boqortooyada Ingiriiska ayaa daaha ka rogtay qodobada ugu muhiimsan ee looga wada hadli doono shirka London ka furmaya ee looga hadlayo xaaladdaha Soomaaliya, waxaana qodobada ugu muhiimsan ka mid ah kuwa ay isla qorsheeyeen wakiilada caalamiga ah iyo dawladda Faderaalka. Sidda lagu baahiyey bar gaar ah oo loogu talo-galay arrimaha […]
XOG XASAASI AH: Maxaa dhexmaray Madaxda DF Soomaaliya & Siyaasiinta Beesha Habargidir oo xalay kulmay
MUQDISHO(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay xalay kulan xasaasi ah wada yeesheen Siyaasiinta labada Aqal ugu jira Qabaa’ilka Habargidir oo ay ka wada hadleen arrimo kusaabsan xaaladda Soomaaliya. Warar hoose oo ku dhaw dhaw shirkan ayaa u sheegay Warsidaha Puntlandtimes in laga wada hadlay arrimaha ku saabsan Dilkii Wasiirkii […]
WAR CUSUB: Al- Shabaab oo faahfaahin ka bixiyey weerar lagu qaaday
MUQDISHO(P-TIMES)- Kooxda Al- Shabaab ayaa faahfaahin ka bixisey duulaan lagu qaaday bar ay ku tababarayeen kooxo ay u diyaariyeen weeraro qorsheysan oo ay fuliyaan bisha Barakeysan ee Ramadaan. Afhayeenka kooxdaas ee dhanka dagaalada Cabdicasiis Abu Muscab ayaa sheegay in ay si deg deg ah uga jawaabeen weerar uu sheegay in ay uga yimaadeen dawladda Faderaalka […]